Dawladda federaalka oo soo dhaweysay qorshe midawga Afrika ku dalbadeen qadista cuna-qabataynta hubka ee Soomaaliya. – Radio Daljir
Dawladda federaalka oo soo dhaweysay qorshe midawga Afrika ku dalbadeen qadista cuna-qabataynta hubka ee Soomaaliya.
Oktoobar 14, 2012 1:57 g 0
Muqdisho, Oct 14 – Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si lixaadleh u soo dhawaysay hindise ururka midawga Afrika ay dhawaan ka shaqamiyeen oo ku aaddan in la-laalo cuna-qabataynta hubka ee muddada dheer saarnayd dalka Soomaalia.
Dawladda, ayaa sheegtay hirgalka hindisahaasi in uu yahay mid wax badan ka tari kara soo celinta xasiloonada dalka Soomaaliya, ayna awood fiican heli karaan ciidamada Soomaaliyeed amniga iyo kuwa difaacuba.
Maxamed Cali Catoosh oo kusime ka ah wasaaradda gaashaan-dhigga Soomaaliya ayaa waraysi uu la yeeshay Radio Daljir, ayaa kaga xog-warramay aragtida dawladda federaalka ee ku aaddan in la qaado cuna-qabataynta xagga hubka ka saaran Soomaaliya, isagoo xusay tallaabadaasi dawladdu in ay soo dhaweynayso wax-ku-oolna u aragto.
Md. Catoosh, waxaa uu intaasi raaciyey xilligaani in uu yahay markii ugu habboonaa ee Soomaaliya ay istaahisho in loo ogalaado hubka.
Hadalkaan soo dhaweyneed ee dawladda federaalka, ayaa yimid iyadoo dhawaan ururka midnimada Afrika uu Qaramada Midoobay ka dalbaday qaadista cuna-qabataynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Macaawimooyin loogu gargaarayo dadkii ku hanti-waayey fatahaadda wabiga oo Beledweyn la gaarsiiyey.